Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium (Shwe Zabu Deik Construction Co.,Ltd.) | iMyanmarHouse.com
Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium
13798 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီး
မကြာသောကာလအတွင်း အလျင်အမြန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည့် ရန်ကုန်မြို့တော်၏ အဓိက အရေးပါအချက်အချာကျ၍ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုမရှိသော အလုံကမ်းနားလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ Shwe Zabu River View Complex ကတော့ ကွန်ဒိုနဲ့မှ နေချင်ပါတယ်ဆိုသူတွေအတွက် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ကွန်ဒိုတွေရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေနဲ့ အတူအသင့်စောင့်နေပါတယ်။
ရန်ကုန်မြစ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်း က သဘာဝအလှအပတွေနဲ့ သန့်ရှင်း လတ်ဆတ်သောလေကို ရှုရှိုက်ရင်း မြို့တော်ရန်ကုန်ရဲ့ ကျက်သရေဆောင်ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး ကို ဖူးမျှော်ကြည်ညိုနိုင် တဲ့ နေရာမှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ အပြင် ရန်ကုန်မြို့တွင်းကို အချိန်အနည်းငယ်အတွင်းရောက်ရှိနိုင်ပြီး နေထိုင်သူတွေအတွက် အဓိကလိုအပ်သောနေရာများ ဖြစ်တဲ့ ကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ ပန်းခြံ၊ ဈေး စသည့်နေရာများနဲ့ ပါ အနီးဆုံးနေရာမှာတည်ဆောက်ထားလို့ နေထိုင်မယ့်သူတွေအတွက် မွန်းကျပ်တဲ့ မြို့ပြအထိအတွေ့ကို မေ့ပျောက်နိုင်တဲ့ အပြင် မိမိနေ့စဉ် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအတွက်လည်း သွားရေးလာရေး လွယ်ကူသက်သာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြေအကျယ်အဝန်း (၁.၅ ဧက) ရှိသော မြေပေါ်မှာ Tower (၄) လုံးပါဝင်ပြီး အခန်းပေါင်း (၁၀၄-ခန်း)ဖြင့်ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ထားတဲ့ Shwe Zabu River View Complex တွင် နေထိုင်သူများအတွက် လုံလောက်သော Car Parking ပါရှိမှု နဲ့ အဆောက်အဦးအတွင်း အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာဝင်ထွက် သွားလာနိုင်စေရန် ကားအဝင်အထွက် လမ်းကြောင်းတွေကို အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့အပြင် Shwe Zabu River Complex တွင်နေထိုင်သူတွေအတွက် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီစွာနေထိုင်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး Architectural ပိုင်းဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွန်းများ၊ Structural ပိုင်းဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွန်းများကို အသေးစိတ် စိစစ်လေ့လာ တွက်ချက်တည်ဆောက်ထားလို့ အင်အားကြီးမားတဲ့ ငလျင်ဒဏ် တွေကိုတောင် ခံနိုင်ရည်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Build Operate Transfer (B.O.T) စနစ်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော Condo Project များကဲ့သို့ မြေငှားသက်တမ်းကာလနှစ် ၃၀(သို့) နှစ် ၅၀ ပြည့်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ရမည့် Condo အခန်းပိုင်ဆိုင်မှုမျိုးမဟုတ်ဘဲ " Shwe Zabu River Complex" သည်ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းတည်ဆောက်ထားသောကြောင့် နှစ်ကာလကြာရှည်၍ အဆောက်အဦးယိုယွင်းပျက်စီးမှုများဖြစ်ပေါ်လာပါက မူလအဆောက်အဦးထက်မက ကြီးသောအဆောက်အဦးကို ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီး အခန်းပိုင်ရှင်များမှ မိမိတို့အခန်းများကို နဂိုမူလအတိုင်း ပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့် သားစဉ်မြေးဆက် လက်ဆင့်ကမ်းပိုင်ဆိုင်ပြီး နောင်ရေးစိတ်ချစွာဝယ်ယူနေထိုင်နိုင်ပါသည်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် နောင် ၃-နှစ်ကြာမှ ရရှိနိုင်မည့် Condo Facilities များကို Shwe Zabu Deik Construction မှတည်ဆောက်ထားသော Shwe Zabu River View Complex တွင် ယခုအချိန်မှစ၍ မျက်မြင်ရရှိပိုင်ဆိုင်နေထိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည့်အတွက် လူကြီးမင်းတို့၏ လူနေထိုင်မှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားပြီး စိတ်အေးချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး တည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့် ဝယ်ယူနေထိုင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
အခန်းအကျယ်အဝန်း နှင့် အခန်းတွင်းဖွဲ့စည်းပုံ
ကွန်ဒိုနေမိသားစုတွေအနေနဲ့ သက်သောင့်သက်သာနေနိုင်ဖို့ အခန်းဖွဲ့စည်းမှုပုံစံတွေကို (စတုရန်းပေ ၂၁၀၀၊ စတုရန်းပေ ၂၂၀၀၊ စတုရန်းပေ ၂၃၀၀) ဆိုပြီး အသီးသီးရှိပါတယ်။ ကျယ်ဝန်းတဲ့ အတွက် ကြိုက်နှစ်သက်မှုကို ရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခန်းတိုင်းအတွက် လေကောင်းလေသန့် နဲ့ အလင်းရောင်ကောင်းစွာရရှိနိုင်ဖို့အတွက် Double Glass မှန်များ တပ်ဆင်ပေးထားလို့ အသံလုံခြင်း၊ အအေးဓါတ်ကို ထိန်းပေးထားခြင်း စတဲ့ အားသာချက်တွေကိုခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခန်းအတွင်းပိုင်းပြင်ဆင်မှုများအနေနဲ့ကတော့ ဧည့်ခန်းနဲ့ အိပ်ခန်း တွေမှာကျွန်းပါကေးခင်းပေးပြီး ရေချိုးခန်းများ၊ မီးဖိုခန်းနံရံနဲ့ ကြမ်းခင်းအားလုံးကို ကြွေပြား အပြည့်ကပ်/ခင်းပေးထားပါတယ်။
ဘိုထိုင်အိမ်သာ ၊ ဘေစင်စတာတွေကိုတော့ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ(INAX) အမှတ်တံဆိပ်များတပ်ဆင်ပေးထား တဲ့အပြင် မီးဖိုခန်းများတွင် အဆင့်မြင့် Kitchen Counter & Cabinet များတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
Condominium တွင် ပါဝင်မည့် Facilities များ
3MVA, Fuji Transformer Japan (Dry Type) တပ်ဆင်ထားခြင်း (10-Years Maintenance Free)
လျှပ်စစ် အန္တရာယ်ကနေ ကင်းဝေးစေရန် (Cable System) အသုံးမပြုဘဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်ကွန်ဒိုအဆောက် အအုံတွေမှာမှ တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းမရှိသေးသော (Aluminium Busduct System) (Nissin Japan) ဖြင့် လျှပ်စစ်မီးလိုင်းတွေကို တပ်ဆင်ပေးထားတာကြောင့် Stabilizer တပ်ဆင်အသုံးပြုရန် မလိုအပ်တဲ့အပြင် ဝါယာ ရှော့ဖြစ်ခြင်းမှ ကင်းဝေးနိုင်ပြီး မီးကြိုးတွေကြွက်ကိုက်သည့်အန္တရာယ်ကလည်း ကင်းဝေးစေမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်မီးအပြည့်အဝရရှိနိုင်ဖို့အတွက် 880 KVA (Kohler Power System, U.S.A) Generator (၂-လုံး) တပ်ဆင်ပေးထားပြီးAutomatic Dual Meter System တပ်ဆင်ထားတာကြောင့် (EPC & Generator) မီတာယူနစ်တွေကို အလိုအလျှောက်ခွဲခြားဖတ်ပေးနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ရေသုံးစွဲမှု ပြည့်စုံလုံလောက်စေဖို့အတွက် စည်ပင်သာယာကပေးတဲ့ ရေအပြင်အရံအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် ၁၀ လက်မ အဝီစိတွင်း (၄-တွင်း) ပါရှိပါတယ်။
အဆောက်အဦးမှာရှိတဲ့ အခန်းအားလုံးအတွက် ရေကို Centralize System နဲ့ဖြန့်ဝေပေးပါတယ်။
ရေဖြန့်ဝေခြင်းအတွက် တပ်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့ Multi Layer Pipe တွေက အင်ဒိုချိုင်းနားကျွန်းဆွယ် နိုင်ငံတွေ အနက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် Shwe Zabu River Complex တွင်သာ ပထမ ဆုံးတပ်ဆင်အသုံးပြုထားတာလဲဖြစ်ပါတယ်။
Multi Layer Pipe များအတွက်လည်း အာမခံကို ၁၀ နှစ်အထိပေးထားတာကြောင့် အခန်းပိုင်ရှင်များ အတွက် ရေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အ၀ ရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတ်လှေကားလုံခြုံရေးအတွက် Double Card Access Security System တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ (၁၃)ယောက်စီး (Schindler Lift)အမှတ်တံဆိပ် ဓါတ်လှေကား (၈)စီး တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
လုံခြုံရေးစနစ်အတွက် Video Phone စနစ်, CCTV စနစ်များတပ်ဆင်ပေးထားတဲ့အပြင် ဓါတ်လှေကား ဝင်ပေါက်မှာလည်း Security Door တွေတပ်ဆင်ပေးထားလို့ အပြင်လူများ မဝင်ရောက်နိုင်ပါဘူး။
Basement Car Parking အတွက်ကိုတော့ Card System (Auto Gate Barrier)တပ်ဆင်ပေးထားတာ ကြောင့် ပြင်ပကကားများဝင်ရောက်ရပ်နားနိုင်ခြင်း မှလည်း အလိုအလျောက်တားဆီးပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ဖို့အတွက် (ဂါလံ-၃၀၀၀၀ ဆံ့) မီးသတ်ရေကန်ထားရှိပေးထားပြီး အဆင့်မီ မီးငြိမ်း သတ်စနစ်များ၊ Fire Alarm System များတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
Relax Area မှာတော့ မိသားစုတွေ စိတ်အေးချမ်းသာစွာ အပန်းဖြေနိုင်ဖို့အတွက် Green Area များ၊ပါရှိတဲ့အပြင်
သာရေးနာရေးခန်းမအတွက် လူ (၅၀)ဆံ့တဲ့ ခန်းမကျယ်၊၂၄ နာရီလူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်ရန် Mini Mart ၊ ကလေးများအတွက် Playground (Professional) ၊
မိသားစု (၁၉) ယောက်ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မယ့် Karaoke & Home Theater (အသုံးပြုနှုန်းထားအနေဖြင့် (၁) နာရီပျမ်းမျှ ကျပ် ၁၀၀၀၀ိ/- မှ ကျပ် ၂၀၀၀၀ိ/- ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်) ၊ Ambassador Lounge/ Beauty Saloon/ Gym Room (professional) တို့ပါရှိတဲ့အပြင်မြစ်ရှုခင်း View ကိုတွေ့မြင်ခံစားနိုင်မယ့် ရေကူးကန် Swimming Pool လည်းပါရှိပါတယ်။
မြစ် View ကိုတွေ့မြင်ခံစားနိုင်မည့် Swimming Pool ပါရှိခြင်း
ကွန်ဒိုနေမိသားစုများ သက်တောင့်သက်သာစွာနေထိုင်နိုင်ရန်အတွက် ကျယ်ဝန်းသော အခန်းဖွဲ့စည်းပုံများဖြင့်(၂၁၀၀ စတုရန်းပေ၊ ၂၂၀၀-စတုရန်းပေ၊ ၂၃၀၀ စတုရန်းပေ) စသည့်အကျယ်အဝန်းများဖြင့် တည်ဆောက်ထားခြင်း။
လေကောင်းလေသန့်နှင့် အလင်းရောင်ကောင်းစွာရရှိနိုင်ရန် Double Glass မှန်များ တပ်ဆင်ပေးထားခြင်းကြောင့် အသံလုံခြင်း၊ အအေးဓါတ်ကို ထိန်းပေးထားခြင်း။
အခန်းအတွင်းပိုင်းပြင်ဆင်မှုများအနေဖြင့် ဧည့်ခန်းနှင့်အိပ်ခန်းများတွင် ကျွန်းပါကေးခင်းပေးခြင်း၊ ရေချိုးခန်းများ အားလုံးကို ကြွေပြား အပြည့်ကပ်/ခင်းပေးခြင်း။
အိမ်အဝင် Main Door ကိုခန့်ညားလှပသော (YKK AP-Japan အမှတ်တံဆိပ်) Security door များကို တပ်ဆင်ပေးထားခြင်း။
ကွန်ဒိုအခန်း (၁) ခန်းစီအတွက် ကားပါကင် (၁ စီး) ထားရှိပေးခြင်း။
Type 1 - 2100 sqft
Type2- 2300 sqft
Type3- 2200 sqft
Type4- 2200 sqft
Shwe Zabu Deik Construction Co.,Ltd.
Shwe Zabu River View Complex, Service Floor, Strand Road, Ahlone Township, Yangon Myanmar.
Shwe Zabu Deik Construction Co.,Ltd. မှ ဆောက်လုပ်သော အခြား Project များ